Dowladda oo sheegtay in uu isku soo dhiibay Sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa | Xaysimo
Home War Dowladda oo sheegtay in uu isku soo dhiibay Sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa
Dowladda oo sheegtay in uu isku soo dhiibay Sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa
Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Bakool ayaa waxaa ay soo bandhigeen Sarkaal ay sheegeen in uu ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab, kaas oo ay sheegeen in uu isku soo dhiibay.
Sarkaalkaan oo Magaciisa lagu sheegay Colaad Cabdiraxmaan Xerow ayaa Saraakisiha Ciidamada Dowladda waxaa ay kusoo bandhigen degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool,waxaana ay sheegeen in muddo 11 Sano ah uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Guddoomiyaha dhinaca Ammaanka ee degmada Xudur Ibraahim Isaaq Ibarahim ayaa sheegay in Sarkaalkaan uu kamid ahaa dadka degmada Xudur, isla markaana uu uga mahad celinayo in uu isaga soo baxo Al-Shabaab oo uu ka tirsanaa muddoo 11 Sano ah.
Colaad Cabdiraxmaan Xerow oo ah Sarkaalka ka tirsanaa Al-Shabaab ee Ciidanka Dowladda isku soo dhiibay ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay in Al-Shabaab uu ugu Shaqeyn jiray Darawalnimo, waxaana uu ugu baaqay Shacabka inay cafiyaan.
Si kastaba Al-Shabaab dhankooda weli kama hadlin warkaan kasoo baxay Maamulka degmada Xudur ee ku aadan in uu Ciidanka dowladda isku dhiibay Sarkaal ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab kana howlgalayay deegaano ka tirsan gobolka Bakool.